Zangaphandle bag inkampu icooler 8L IB001-8 | Zone
ibhegi encinci yokupholisa
intengiso yamanzi kunye ne-thermal
ngwevu / eluhlaza okanye ngokwezifiso
I-24 * 16 * 14cm
I-33 * 30 * 23CM
Ukuloba, ukumisa inkampu, ipikinikini
Ingxowa ye-inshurensi yeylondolozo olubandayo lomzimba kwaye kufuneka isetyenziswe ngee-cubes ze-ice (ibhegi yomkhenkce / ibhokisi yomkhenkce)
1.Advanced Performance okupholisa: 3 maleko basebenza kunye ukugcina ukutya kwakho&iziselo pholisa for ixesha elide. maleko sangaphandle phezu kwamanzi-yokucaca kuqinisekise akukho ukubila, umaleko eliphakathi isiponji ache elingaphakathi igcwele ngokupheleleyo ukuvuza-proof eziphathekayo.
2.Small ubungakanani,: lula ukuluqhuba, ingasetyenziswa njengoko ibhegi yokugquma umsebenzi sasemini ngemihla, ekwaziyo ibamba 8 iinkonkxa (300ml) iziselo. ubukhulu Perfect imisebenzi eyahlukeneyo ngaphandle efana inkampu, ukunyuka intaba, BBQs, njl, unga beka ingxowa kuyabanda nesiqu emotweni xa uthatha uhambo imoto.
3,100% Leakproof& Nefuthe Resistant: liphole oluthambileyo isebenzisa iqokobhe manzi kwaye nzima ukumelana ukuhlatywa kunye UV eyingozi. ndlela ephawulekayo seqanda angakuthinteli wena ingakrweleki. D-bopha ingasetyenziswa ukuxhoma isitshixo, eVancouver.
4.Three Iindlela Ukuthwala: Isixhobo kunye negxalaba detachable zinoboya umtya kunye macala mabini yokusingatha iirholithi. Ungaba bayichole ezizibeni zamagxa zinoboya okanye ubambe izibambo osecaleni asindayo ukwenza izandla zakho free.
5.BPA Free& Easy to Clean: Le nqanawa of Iicooler soft-kabini ezenziwe ngelaphu free BPA, umgangatho ophezulu. Kwaye bag epholile Kulula iitawuli iphepha ecocekileyo, ukusetyenziswa nje ngokulula ecocekileyo kunye amavumba musa ukuchitha, ukunqanda nokuvunda kwaye nangesihumba ukuba ukukhula.
Yenziwe ngezinto ze-hypalon fapric njengengaphandle kunye ne-cotton cotton iphakathi,Ingxowa epholileyo inokubamba amaqondo obushushu, akukhathaleki okanye afudumele. Iyenziwe kakuhle ukugcina ukubanda ngaphezulu kweeyure ezingama-48, phantse kwiintsuku ezi-2,kunye neeyure ezingama-4-5 ezishushu. Kuhle ukugcina obu bushushu obusebenzayo ukukhulisa ukugcinwa kwe-ice kunye nokugcina ukutya okanye iziselo ezitsha,Imo efudumeleyo, ebandayo kuwe.
[I-100% yoBungqina& Amanzi angenzi propers
Ingxowa yenkampu kukwenza uhambo lwakho, uhambo lwendlela, i-picnics kunye nokuhamba ngenkampu ivuyisekile,Ubungqina obuvuzayo kunye neempawu zamanzi zezinto ezilungileyo kuzo. Ngezinto eziqinileyo, ezisemgangathweni kunye ne-zipper ekhethekileyo,Ingxowa epholileyo ayiyi kukuyeka xa uyibeka kwitrunk okanye kwisitulo esingasemva seemoto zakho.Kwaye iimoto zakho okanye kwenye indawo aziyi kuphuma okanye zifakwe ngenxa yokusebenzisa le ngxowa epholileyo.
Nikeza ubuchule kwi-1000 yeziqwenga / iziqwenga ngemini
I-1PCS / I-PEG
Ubungakanani (iziqwenga) 1 - 1000 >I-1000
Est. Ixesha (iintsuku) 30 Kuyaxoxwa
Q: Ngaba uyayivavanya zonke iimpahla zakho ngaphambi kokuhanjiswa?
Q: Ungayikhusela njani imilo yam kunye nophawu lwam?
I-A: Ulwazi oluyimfihlo aluyi kuchazwa, luveliswe ngokutsha, okanye ukusasazwa nangayiphi na indlela, sinokutsala isivumelwano semfihlo kunye nokungenisa imvumelwano kunye neMidlalo ye-Uzone ijolise ekwakheni inkqubo yeshishini eMiselweyo, kwaye iyayiqonda iMvumelwano , Imfihlakalo yabathengi, ip, kunye nezinye izinto zabucala njl.
Q: Yintoni le Nqinipha iXesha lokuHanjiswa?
Q: Yintoni i-MOQ kumdlalo wezoda?